माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना: निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा ।
२०७६ पौष २४ बिहिवार, www.gorkhapatraonline.com
काठमाडौँ, मङ्सिर ३० गते । सङ्खुवासभाको भोटखोलामा बनाउन लागिएको एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपले आकर्षक देखिएको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले प्राविधिक रूपले चुस्त र उत्पादन लागत, लगानी प्रतिफलमा आकर्षक देखाएको हो । सरकारी आयोजनाका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत बनाउन लागिएको अर्धजलाशययुक्त सो आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गर्न लागिएको हो । यो योजनाको निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । आयोजना मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको असोजमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा पनि हेरिएको छ । सन् २०२२ को अन्त्यतिरबाट निर्माण थाल्ने र २०२७ को मेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड ८ लाख रुपियाँ हुन्छ । वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट सुक्खायामका चार महिनामा मात्रै २८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवाट विद्युत् उत्पादन लागत ३.५ सेन्ट (अमेरिकी डलर) रहनेछ । त्यस्तै आर्थिक प्रतिफल दर १७.९ प्रतिशत र लागत प्रतिफल अनुपात लगानीको दोब्बर हुनेछ । आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी सीएसपीडीआर–सिनोटेक जेभीले मङ्सिर १३ गते निर्माण कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा’
अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख रामचन्द्र पौड्यालका अनुसार यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । “आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले यो आयोजना अत्यन्तै अकर्षक हुने देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” कम्पनीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका विज्ञ समूहबीच अध्ययन गराइरहेको छ । परामर्शदाताले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । पौड्यालका अनुसार गत असारमा आयोजना स्तरोन्नति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन रिपोर्ट) आएपछि थप भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनाका धेरै पक्ष निर्धारित भइसकेका छन् । आयोजनालाई निर्वाध रूपमा निर्माणको चरणमा लैजान सरकार र प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ । आयोजनामा ऋण लगानी गर्न विश्व बैङ्क तथा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क सकारात्मक छन् । विश्व बैङ्कले ५० करोड अमेरिकी डलर र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले ३० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न तयार रहेको आश्वासन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन् । “स्वदेशी लगानीकर्तासँग पनि लगानीका विषयमा हामी छलफलको तयारीमा छौँ,” पौड्यालले भन्नुभयो, “आयोजन निर्माणको ठेक्काका लागि कागजात तयार गरिरहेका छौँ ।”
यस्तो बन्दै छ आयोजना
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नं. २ र ४ मा बन्न लागेको यो आयोजना अरुण नदीमा बन्ने किमाथाङ्का आयोजनापछि दोस्रो माथिल्लो आयोजना हो । ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’ मोडलमा बन्ने यो आयोजना निर्माणका लागि चेपुवानजिक अरुण नदीमा ९१ मिटर अग्लो र १८४ मिटर लामो बाँध बाँधिने छ । यसबाट ५० लाख घनमिटर पानी सञ्चय हुने जलाशय बन्ने छ तर विद्युत् उत्पादन प्रयोजनमा दैनिक २४ लाख घनमिटर पानी उपलब्ध हुनेछ । यो पानी ८.४ मिटर ब्यासको आठ हजार ३६२ मिटर लामो सुरुङ हुँदै भोटखोला–४ चोङराङमा बन्ने भूमिगत विद्युत्गृहमा पानी पु¥याइने छ । विद्युतगृहमा रहने १७७ मेगावाट क्षमताका छवटा टवाईन युनिटमा ४८३ मिटर ठाडो सुरुङबाट पानी पठाई विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसरी उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले बनाउने प्रस्तावित हाइटार–शीतलपाटी ४०० केभी डबलसर्किट प्रसारण लाइनमार्पmत अरुण हब सबस्टेसनमा पु¥याउने योजना कम्पनीको छ । यसका लागि आयोजना स्थलबाट हाइटारसम्म करिब आठ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन आयोजनाले बनाउनुपर्नेछ । आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग सडक विभागले गत कात्तिकदेखि निर्माण थालेको छ । अरुण तेस्रोको पहुँचमार्गसँग जोडिने गरी २४ किलोमिटर बाटो बनाउन लागिएको हो । कम्पनीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका विज्ञ समूहबीच अध्ययन गराइरहेको छ । परामर्शदाताले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । पौड्यालका अनुसार गत असारमा आयोजना स्तरोन्नति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन रिपोर्ट) आएपछि थप भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनाका धेरै पक्ष निर्धारित भइसकेका छन् । आयोजनालाई निर्वाध रूपमा निर्माणको चरणमा लैजान सरकार र प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ । आयोजनामा ऋण लगानी गर्न विश्व बैङ्क तथा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क सकारात्मक छन् । विश्व बैङ्कले ५० करोड अमेरिकी डलर र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले ३० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न तयार रहेको आश्वासन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन् । “स्वदेशी लगानीकर्तासँग पनि लगानीका विषयमा हामी छलफलको तयारीमा छौँ,” पौड्यालले भन्नुभयो, “आयोजन निर्माणको ठेक्काका लागि कागजात तयार गरिरहेका छौँ ।”
‘अझै सस्तोमा बन्नसक्छ’
– ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, ऊर्जा उद्यमी
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय हिसाबले मात्र होइन, क्षेत्रीय विद्युत् वितरणलाई स्टेबल बनाउनसक्ने आयोजना हो । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमै करिब २ प्रतिशत बढावा दिनेछ । यो आयोजनाको कुल लागत अझै सस्तो हुनुपर्ने हो । अहिले १५ करोड प्रतिमेगावाट लागत अनुमान छ तर यो २० प्रतिशत कम हुनसक्ने आयोजना हो । निजी क्षेत्रले बनाउँदा यो १२ करोड प्रतिमेगावाटमा बन्नसक्ने देखिन्छ । सरकारी आयोजना भए पनि यसलाई अझै मितव्ययी रूपमा बनाउन सकिन्छ । माथिल्लो तामाकोसी जस्तो लागत उच्च हुने खतरा आउनेमा पहिल्यै सचेत हुनुपर्छ, अर्को तामाकोसी बनाइनु हुन्न ।
– अनुपकुमार उपाध्याय, पूर्व ऊर्जा सचिव
माथिल्लो अरुण हाइड्रोलोजीका हिसाबले आकर्षक परियोजना हो । अहिले भनिएकै आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न, सस्तो लगानीमा बनाउन चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । ऋण कस्तो प्रकृतिको प्राप्त हुने हो, त्यसको ब्याजदर कति हुने भन्ने कुराले पनि प्रतिफल निर्धारण गर्नेछ । विद्युत् कसले खरिद गर्ने, कुन दरमा खरिद गर्ने र कति खरिद गर्ने भन्ने निर्धारण हुँदा मात्र वास्तविक लागत र उपलब्धि निश्चित हुनेछ । अहिले गरिएका विश्लेषण र अध्ययनले भविष्यमा परिवर्तन हुनसक्ने आधारहरूलाई कत्तिको ध्यान दिएको छ, त्यो पनि विचारणीय हो । यसलाई निर्धारित समय र योजनाअनुरूप नै बनाउन सकियो भने उपलब्धिपूर्ण नै हुनेछ ।
Hydro Solutions (HSL) isarapidly expanding, contemporary and conscientious group in hydropower sector providing integrated support to hydropower development that includes identification, development including project engineering. It assumes responsibilities ranging from consulting, planning, design, engineering, project finance, operations and construction supervision.
HSL Group Link
HydropowerTourismReal EstateEducationCapital MarketManufacture